Waves Community Token စျေး - အွန်လိုင်း WCT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Waves Community Token (WCT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Waves Community Token (WCT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Waves Community Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $540 811.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Waves Community Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Waves Community Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Waves Community TokenWCT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0604Waves Community TokenWCT သို့ ယူရိုEUR€0.0511Waves Community TokenWCT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0462Waves Community TokenWCT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.055Waves Community TokenWCT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.537Waves Community TokenWCT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.381Waves Community TokenWCT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.34Waves Community TokenWCT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.225Waves Community TokenWCT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0799Waves Community TokenWCT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0845Waves Community TokenWCT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.34Waves Community TokenWCT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.468Waves Community TokenWCT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.324Waves Community TokenWCT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.52Waves Community TokenWCT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.2Waves Community TokenWCT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0829Waves Community TokenWCT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0925Waves Community TokenWCT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.88Waves Community TokenWCT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.42Waves Community TokenWCT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.46Waves Community TokenWCT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩71.62Waves Community TokenWCT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦23.4Waves Community TokenWCT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.42Waves Community TokenWCT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.66
Waves Community TokenWCT သို့ BitcoinBTC0.000005 Waves Community TokenWCT သို့ EthereumETH0.000157 Waves Community TokenWCT သို့ LitecoinLTC0.00111 Waves Community TokenWCT သို့ DigitalCashDASH0.000665 Waves Community TokenWCT သို့ MoneroXMR0.000678 Waves Community TokenWCT သို့ NxtNXT4.71 Waves Community TokenWCT သို့ Ethereum ClassicETC0.0089 Waves Community TokenWCT သို့ DogecoinDOGE17.43 Waves Community TokenWCT သို့ ZCashZEC0.000733 Waves Community TokenWCT သို့ BitsharesBTS1.86 Waves Community TokenWCT သို့ DigiByteDGB1.93 Waves Community TokenWCT သို့ RippleXRP0.214 Waves Community TokenWCT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00208 Waves Community TokenWCT သို့ PeerCoinPPC0.2 Waves Community TokenWCT သို့ CraigsCoinCRAIG27.52 Waves Community TokenWCT သို့ BitstakeXBS2.58 Waves Community TokenWCT သို့ PayCoinXPY1.05 Waves Community TokenWCT သို့ ProsperCoinPRC7.58 Waves Community TokenWCT သို့ YbCoinYBC0.00003 Waves Community TokenWCT သို့ DarkKushDANK19.38 Waves Community TokenWCT သို့ GiveCoinGIVE130.81 Waves Community TokenWCT သို့ KoboCoinKOBO13.76 Waves Community TokenWCT သို့ DarkTokenDT0.0556 Waves Community TokenWCT သို့ CETUS CoinCETI174.44
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:55:02 +0000.